Miandry amim-pitoniana sy amim-paharetana… | NewsMada
Vita ny fandatsaham-bato. Arahaba soa, arahaba tsara; eny, na nisy aza ny indro kely maromaro tetsy sy teroa. Hakana lesona ny lesoka hanitsiana ny ho avy. Hanao ahoana ny ho vokatra? Miandry amim-pitoniana sy amim-paharetana ny rehetra; eny, na efa somary tsinjo sompirana ihany aza izay ho voka-pifidianana ankapobeny.
Izao indrindra no ifampitsinjovana amin’ny hoe fifidianana eken’ny rehetra. Nahoana? Mbola misy hatrany tsinona ny fanahiana korontana, indrindra raha hoe tsy araka izay nanombanana sy nanampoizan’ny tena azy ny voka-pifidianana. Ny vahoaka no tompom-pahefana sy tompon’ny teny farany: eken-tsafidy na toy inona vokatra eo.
Ny fandatsaham-bato sy ny fanisam-bato ary ny fanaraha-maso hatramin’ny farany, ho hita sy vita ihany; eny, na mbola mety hisy aza ny fifanolanana amin’ny fifanenjanana sy fifanenjehana. Misy ny fomba sy ny dingana ary ny lalàna arahina amin’izany. Mila eken’ny rehetra koa izay ao anatin’ny fahalalahana sy ny fangaraharana.
Miandry amim-pitoniana sy amim-paharetana izay ho voka-pifidianana farany àry ny vahoaka. Mandra-pitrangan’izay hitranga, na hisy fihodinana faharoa io na tsia: tsy miverin-dalana ny tantara, dingana iray iny afaka iny. Ahoana amin’izay ny ho tohin’ny raharaha? Mila mijery lavitra amin’izay, na toy inona tsy fitovian-kevitra.
Sao sasatry ny miarina sy manarina? « Tsy mamafa ireo olana ny fifidianana », hoy ny Praiminisitra frantsay teo aloha izay, i Jean-Pierre Raffarin. Ahoana, ohatra, ny amin’ny fanorenana ifotony? Na lalàmpanorenana io, na rafitra, na fomba fiasa… Miara-dalana amin’izany ny fampihavanam-pirenena tsy hita be ihany.
Manginy fotsiny amin’izany ny fandaharanasan’izay voafidy eo, na iza na iza. Ahoana amin’izay, ohatra, ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly, ny fandrobana tany sy harem-pirenena… Izay no tena raharaha, mila fanaraha-maso akaiky sy mitohy. Mba tsy ho sarin’ady sy fombafomba fotsiny ny fifidianana.